Chii chinonzi Rotomolding
Rotational Kuumbwa (BrE kuumbwa) kunosanganisira inopisa inopisa mhango muforoma iyo izere nemutero kana kupfura huremu hwezvinhu. Iyo inozo tenderedzwa zvishoma nezvishoma (kazhinji ichitenderedza maviri akapingura masanhu) ichikonzera izvo zvakapfava zvinhu kuti zvipararire uye zvinonamatira kumadziro eforoma. Kuti uchengetedze kunyangwe ...
Chakanakira Rotational richigadzirisa:
1) Mari yekushandisa zvemari. 2) Imwe-chidimbu kuvaka. 3) Kurera uremu-zvichienzaniswa nesimbi zhinji. 4) Yunifomu madziro ukobvu-nothinning mune ekupedzisira. 5) Ukobvu hunogona kuve hwakasiyana kana zvichidikanwa 6) Mhando dzakasiyana dzekupedzisa uye ruvara. 7) Kugona kuburitsa akawanda-madziro kuumbwa. 8) Dhizaini flexibili ...
Zvakanakira kutenderera zvigadzirwa uye jekiseni zvigadzirwa
Nguva dzese mujekiseni jekiseni, zvinhu zvinowedzerwa zvakananga kuforoma, izvo zvinoita kuti zvinhu zvese zvipinde muchigadzirwa uye kutora kubva muforoma, uyezve wobva wawedzera izvo zvinodiwa mune inotevera yekuumba maitiro. Kana tichida kushandura ruvara rwechigadzirwa, hatizotambisa chero ...